သတင်း - မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်! နယူး Graphene အမဲဆီ
မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်! နယူး Graphene အမဲဆီ
PETROKING PETROLEUM HEBEI CO ။ , LTD ။ , ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံကိုအခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၃၂ နှစ်တာအမဲဆီထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိပြီးအာရှ၊ အာဖရိက၊ ဥရောပနှင့်အမေရိကရှိစက်မှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်တွင်နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်နှင့် ၁၀ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျနော်တို့ Tianjin ဆိပ်ကမ်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ရထားလမ်းနှင့်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အလွန်အဆင်ပြေသောကြောင့်ပို့ဆောင်ရန်အချိန်ကိုအာမခံနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Multipurpose Lithium Base Grease၊ မြင့်မားသောအပူချိန်အမဲဆီ၊ အလွန်ပြင်းထန်သောဖိအားအမဲဆီ၊ လီသီယမ်ရှုပ်ထွေးသောအမဲဆီ၊ လူမီနီယမ်ရှုပ်ထွေးသောအမဲဆီ၊ ဂရပ်ဖိုက်အမဲဆီ၊ anhydrous ကယ်လစီယမ်အမဲဆီ၊ အင်ဂျင်ရေနံ၊ ဂီယာရေနံ၊
များသောအားဖြင့်အမဲဆီကျခြင်း၏အမှတ်သည် ၁၄၀ ဒီဂရီမှ ၃၈၀ ဒီဂရီဖြစ်သည်။ သူတို့ကဝက်ဝံ၊ ထရပ်ကားနဲ့စက်တွေမှာသုံးနိုင်တယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာအပူချိန်မြင့်သည့်အမဲဆီဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လေးလံသောထရပ်ကားများတွင်သုံးနိုင်သည်။ ပူသောရာသီဥတုတွင်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့က graphene grease အသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ သူရဲ့ကျဆုံးနှုန်းက ၆၀၀ ဒီဂရီမှ ၁၀၀၀ ဒီဂရီဖြစ်သည်။ Graphene grease သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အသစ်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်၍ မူပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုနေသည်။
အင်္ဂါရပ် ၁: ပွတ်တိုက်အား ၅၀% လျှော့ချနိုင်သည်
အင်္ဂါရပ် ၂: ပွန်းစားခြင်း 50% လျှော့ချ
အင်္ဂါရပ် ၃: ၁၀ ဆသက်တမ်းပိုရှည်သည်
အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာယာဉ်မောင်းနှင်မှုကိုလျှော့ချပြီး ၅% လောင်စာကိုချွေတာရန်ဖြစ်သည်
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရတိကျသောထုတ်ကုန်များကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ လက်ရှိထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်တလောက်မှရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏လျှောက်လွှာအတွက်အင်ဂျင်နီယာအကူအညီများကိုရှာဖွေသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့သင်၏အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းလိုအပ်ချက်များအကြောင်းပြောနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အဖြစ်ရှုမြင်ပြီးအဆင့်တိုင်းတွင်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကိုပြုလုပ်ပြီး“ ဖောက်သည်အား ဦး စားပေး” အားကျွန်ုပ်တို့၏ထာဝရစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အဖြစ်အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများသာမကဘဲအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းကမ်းလှမ်းနေပြီးဖောက်သည်အားလုံးနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူသူများအားပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ရန်ပိုမိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါမည်။